यस्तो हुनुमा दाउरा तथा काठका स्थानीय ब्यापारी र स्थानीय नेताहरू बीचको अनैतिक भ्रष्ट गठबन्धन हुनैपर्छ ।
वर र पिपलको रूखको महत्व र ती हुर्काउने, रोप्ने कैयन अघिका परोपकारी पुर्खाहरूको अपमान गर्न तम्सने ती नेपाल आमाको कुलंगार सन्तान हुनुपर्छ । तिनीहरू गाउँघरको संस्कृति, मान्यता, धर्म, परम्परालाई मासेर, बेचेर, पैसा कमाउने दाउमा लागेका हुन् । यसमा वन बिभाग चुप बस्नु अर्को रहस्य हुन पुगेको छ ।
फलेबास धेरै बौद्धिक, बुद्धिजीबी जन्माएको नेपालको महत्वपूर्ण गाउँ हो । तर त्यही गाउँमा नै नेताहरूबाट माफियाहरुको गठबन्धनमा प्रकृतिमाथि यसरी दिन दहाडे बलात्कार हुदैछ र तिनको अगाडी सबै जनता मुकदर्शक र निरीह बनेको देखिनुले आत्मा मरेको फलेबास सिद्ध भएको छ । जुन कुरा मानिसको जीवन कालमा पुन ः गर्न सक्नुहुन्न् त्यो मास्ने कामगर्ने अधिकार कसैमा छैन । त्यस्ता आपराधिक कुकर्मीमाथि कडा सजाय हुनै पर्छ । बेपर्वाह हजारौं रूख बुट्यान काटिसकिएको छ र त्यो क्रम वनको डढेलोसरी फैलदै छ । काटिएका काठ दाउरा तस्करी भइसकेको छ ।
अहिले खेत वा घरबाट २५ मिटर सिमाभित्र रहेका सबै रुख हटाउने पनि आदेश जारी भएको छ । धमाधम रुख काटिएका छन् । काठ दाउरा तस्करी हुदैछ । मान्छे बाहिर भएको, ढोकाबन्द घर कम्पाउण्डमा समेत बिना सूचना घुसेर रुखहरू ढालिदिने र सो पापतको खर्च धनीसँग पछि असुल्ने भनिएको छ । नयाँ, पुराना, यो जात, उ जात नभनी सबै रुख एकै मेसोले काटिदै छन्, काटिएको छ । यसमा वन ऐनकानुनहरु बिपरित काम भएकोले रुख काट्ने र काट्न आदेश दिनेउपर कार्यवाही हुनुपर्ने हुन्छ । यसरी नगरपालिकाको गलत, घातक अभियानको बिरोध पनि भइरहेको छ । यस्ता वन कानुन मिच्ने नगरपालिकाका पदाधिकारीहरू कानुनी दायरामा फस्ने पक्का छ । यस्तो नोक्सानी भइसक्दा पनि सरकार भने चुपचाप बसिरहदा अहिलेसम्म विभिन्न जातका पौराणिक, धार्मिक, पर्यावरणीय, ऐतिहासिक वा भौगोलिक महत्वका सदियौं पुराना समेतका हजारौं रुखहरु ढालिसकेर अपुरणीय क्षति पुगिसकेको छ । वातावरणमाथि जघन्य अपराध हुदैछ, तर राज्य टुलुटुलु कसरी हेरेर बसेको छ ?
यस्ता रूख ढाल्ने जघन्य अपराधिक घटनाहरू स्थानीय सरकारहरूको नेतृत्वमा मुलुकभरि जारी देखिन्छ । मुलुक मरूभूमिकरण र मानव बस्न नालायक बन्ने त होईन भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउन केही हजार रूख बुट्यान काट्न हुन्न दिन्नौं भन्दै चिच्याउनेहरू अहिले मुलुकभरि सदियौं पुराना महत्वपूर्ण करोडौं रूख काटिदा पनि चुप किन छन् ? बिरोध गर्न कतैबाट फण्डिङ नआएर ती चूप रहेका त हैनन् ?
यस्ता अबैज्ञानिक मूर्खतालाई सरकारले तुरून्त हस्तक्षेप गरिहालोस् । कानुनविपरित कामगर्ने अपराधी जनप्रतिनिधि उपर मुद्दा दायर गरियोस् । यस्तो अपराधमा सरकार मतियार बनेको संदेश नजाओस् ।
फलेबास नगरपालिका पर्बत लगायत मुलुकभरि हुदै गरेको सयौं वर्ष पुराना वर, पिपल चौताराका रूख ढालेर इतिहाँस मेटाउने उद्दत आपराधिक जघन्य बर्बादी, पागलपनका घटनाहरू तत्काल रोकियोस् ।
उपाध्याय नेपाल सरकारका सचिव हुन्